एनआरएन अमेरिकाबारे पाँच कर्तब्य र दायीत्व « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एनआरएन अमेरिकाबारे पाँच कर्तब्य र दायीत्व
१) सदस्यता हामी सबैले लिनु पर्छ। यो हाम्रो अधिकार र कर्तब्य दुबै हो। सदस्य भयौं भनेमात्र बेकम्माका च्याखे थाप्न गएका हनुमन्ते हरुलाई तह लगाउन सकिन्छ।
२) सदस्यता नबिकरणमा उत्साह देखिदैन। किन १५ डलर तिर्ने? यो प्रश्न सबै तिर देखिन्छ। यसै मौका छोपेर पैसावाला उमेद्वारहरुले बिगत जस्तै पैसा लगानी गरेर होलसेलमा सदस्यता बनाईदिने हर्कत देखिन सक्छ र देखिएको छ पनि। उनिहरुलाई त जुंगा ठाडो बनाउन जित्नु नै त छ, अलि अलि खर्च गरीदिन्छन। उनिहरुको दोष हुने छैन। यदि हामी १५ डलरमा बिक्यौं भने यो भन्दा गलत निर्णय केहि हुने छैन। अमेरिकामा बसेर सामाजिक सन्जालमा रबाफ र जान्यसुन्य देखाउने अनि १५ डलरमा सदस्यता किन्न लगाएर मत बेच्नु हुन्छ भने, तपाई हाम्रो हैसियत कहां पुग्ला? सोच्नुस त । बरु १,२ घण्टा बढी काम गरौं, र अन्य खर्च कम गरेर जोहो गर्न सकिन्छ।गलत प्रबृत्तीलाई प्रोत्साहन गर्नु हुदैन।
३) बिगतलाई हेर्दा एनआरएन अमेरिकाले केहिकाम गरे पनि जति गर्नु पर्ने थियो गर्न नसकेको यथार्थ हो। प्रमुख कारण चाहि के भने: केहि गर्ने जोश र जांगर नभएका, अनुभब भन्दा पनि पार्टिको गुटको पुच्छर समाएर पुगेका, संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार भन्दा पार्टीको आदेश मान्ने र एनआरएन अमेरिका लाई पार्टीको भात्री संस्था जस्तै लिनु अनि आन्तरिक मुद्दामा फस्नु। अबको एनआरएन अमेरिका शसक्त र कार्यमुखी हुनु पर्छ।
४) किन अझै पनि अमेरिकामा भएका धेरै सक्षम ब्यक्तीहरु जस्ले गैर आबासिय नेपाली र नेपालको हित गर्न सक्षम छन, न खुलेर अगाडी आएका छन नत ल्याउन समुदायले पहल गर्न सकेको देखिन्छ। यो पटक सकेसम्म कृपया केहि गर्ने क्षमता र योग्यता भएकाहरु अगाडी आउनु पर्यो। एनआरएन अमेरिका गैर राजनितीक सस्था हो भन्ने सम्झनु हुन्न र बनाउन पट्कै दिनु हुन्न।
५) अब कस्लाई मत दिएर जिताउने धेरै बिचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। अहिले सम्म घोषणा भएको अनुहारलाई हेर्दा पार्टीको दौरा समाएका, फेसबुकमा साथी बनाउने कमेन्ट र लाईक ठोकेकै भरमा आफुलाई सक्षम र खाटी उम्मेद्बार मान्ने, एउटै पार्टीको नि कुन समुहमा पछि लाग्दा जितिनेछ; दाउ हेरेर बसेका, नेपालमा र यहां पनि सामाजिक भाबना कत्ति पनि नभएका, संगठनको अनुभब नभएका समेत देखिएका छन। पदका भोकाहरु, स्व मुल्याकन गर्नुस त? साच्चै तपाईबाट हामी गैर आबासिय नेपालीले आशा गर्ने ठाउ छ त? सबै उम्मेद्वार हरुको बिगत र बर्तमानको सामाजिक कृयाशिलता योगदानको पहिचान गरेर मात्र जिताअौ। बेलामा सोचेनौ भने एनआरएन अमेरिका लाई झन बरबादी बनाउने छन। अबको हाम्रो एनआरएन अमेरिकाबाट आईसीसी हाक्न सक्ने सक्षम ब्यक्ती हुनु पर्छ ।